Top 10 Fahasoavana ara-pahasalamana amin'ny fametrahana glutathione ho an'ny - Wisepowder
Mahasoa ny Glutathione zavamananaina amin'ny fomba maro amin'ny alàlan'ny fiasa ho antioksida. Izy io dia fitambaran'ny asidra amine misy ao amin'ny sela olombelona rehetra. Ny zavamananaina rehetra dia manana glutathione amin'ny vatany. Izy io dia antioxidant mahery vaika izay rehefa misy ambaratonga sahaza azy dia afaka miaro antsika amin'ny toe-pahasalamana mampidi-doza toy ny aretin'i Alzheimer, aretim-po, ary koa ny lalan-dra.
Na dia vokarina ao amin'ny vatantsika glutathione aza dia mihetsika ao amin'ny vatantsika ny glutathione, ary ampiharina eo amboniny na ampidirina.
Glutathione dia tamboho namboarin'ny fitambaran'ny asidra amina telo: cysteine, glutamika asidra, ary glycine, dia antioxidant mahery vaika izay misakana sy mampihemotra ny fahanterana sela. Ny Glutathione dia manakana ny fahasimbana amin'ny sela ary manaisotra ny simika manimba ao anaty atiny ary mahay mamehy ny tenany amin'ny zava-mahadomelina manampy ny vatana hanala azy ireo mora foana. Izy io dia manatanteraka ny anjara asa manan-danja amin'ny fanamafisana ny tsy fahampiana ny vatana ary mifehy ny fitomboana sy ny fahafatesan'ny sela ao amin'ny vatantsika. Ny haavon'ny glutathione dia voamarina hihena amin'ny fahanterana.
Soa azo avy amin'ny Glutathione
1. Manamaivana ny fihenan'antoka amin'ny oxidative
Rehefa mitombo ny famokarana radikaly maimaimpoana ao amin'ny vatana, ary tsy afaka miady azy ireo ny vatana, dia miteraka fihenjanana amin'ny oksidatif. Ny haavon'ny fihenan'ny oksidratika dia mamela ny vatana mora voan'ny toe-pahasalamana toy ny diabeta, rheumatoid arthritis, ary kansera. Ny Glutathione dia manampy amin'ny fanamaivanana ny adin-tsaina amin'ny oxidative izay manampy ny vatana amin'ny fiarovana amin'ireny aretina ireny.
Ny haavon'ny glutathione avo lenta amin'ny vatana dia fantatra ihany koa ny fampitomboana ny haavon'ny Mahasalama ny. Io fitomboan'ny antioxidant miaraka amin'ny glutathione dia mampihena ny fihenan-danja amin'ny oxidative.
2. Enga anie hanatsara ny fahasalaman'ny fo
Glutathione, miaraka amin'ny fahaizany misoroka ny fitrandrahana tavy amin'ny vatan'olombelona, ​​dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanelingelenana ny aretim-po sy ny aretim-po hafa. Ny aretim-po dia vokatry ny fanangonam-bokatra arakosotra ao am-bavahadin'ny arterial.
Ny lipoproteins ambany be (LDL), na kolesterola ratsy, no mahatonga ny takelaka amin'ny fanimbana ny tsiranoka anatiny ao amin'ny arteria. Mihosotra ireo plaka ireo ary mety hanakana ny lalan-dra, hampitsahatra ny fandatsahan-dra ary hiteraka aretim-po na fivoka.
Glutathione, miaraka aminazy izay antsoina hoe glutathione peroxidase, dia maharesy ny superoxides, hydrogen peroxide, radical gratis sy lipid peroxides izay miteraka fitrandrahana lipid (fitrandrahana tavy). Izany dia manakana ny kolesterola ratsy ratsy manimba ny lalan-dra ary noho izany ny fananganana plakta. Ny glutathione dia manampy amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny aretim-po sy ny aretim-po hafa.
3. Miaro ny sela amin'ny atin'ny alikaola sy aretin'ny atiny
Rehefa misy tsy fahampian'ny antioxidant sy glutathione dia betsaka ny sela aty no maty. Izany dia mampihena ny fahafahan'ny atiny hiady amin'ny atiny matavy sy ny atin'ny alikaola. Glutathione, raha misy amin'ny ambaratonga ampy dia mampitombo ny haavon'ny proteinina, bilirubin, ary ny anzima ao anaty ra. Manampy ny olona sitrana haingana amin'ny aretin'ny aty sy ny alikaola ity.
Avo fatra glutathione nitantana tamim-pitiavana ny olona voan'ny aretin'ny atiny matavy dia mampiseho fa ny glutathione no fitsaboana mahomby indrindra amin'ilay aretina. Izy io koa dia nampihena be ny malondialdehyde, mariky ny fahasimban'ny sela ao amin'ny atiny.
Ny glutathione nazatra am-bava dia nampiseho ihany koa fa ny antioxidant dia misy fiantraikany tsara amin'ny olona mijaly noho ny aretin'ny tavy tsy misy alikaola.
4. Manampy amin'ny ady amin'ny fiakarana
Ny fitrandrahana dia iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny aretina lehibe toy ny aretim-po, diabeta, ary homamiadana.
Ny ratra iray dia mahatonga ny lalan-dra ao amin'ny faritra maratra mba hihanaka ny rà hikoriana mankany amin'ilay faritra. Io ra io dia feno selan'ny hery fiarovana izay manondraka an'io faritra io mba tsy hisian'ny areti-mifindra. Raha sitrana ny faritra maratra, dia mihena ny fihenan-tsasatra ary mihena ny isan'ny hery fiarovana. Sa amin'ny vatana tsy mahasalama voan'ny adin-tsaina, ny poizina, ny fihinana tsy mahasalama dia tsy hihemotra haingana ny fiakarana.
Ny glutathione dia manampy amin'ny tranga toa itony amin'ny fanamafisana ny sela fotsy fiarovana. Izy ireo dia mifehy ny isan'ireo sela fotsy izay mankany amin'ny faritra maratra miankina amin'ny hamafin'ny fisondrotan'ny vidim-piainana.
5. Manatsara ny fanoherana ny insuline
Rehefa mihalehibe isika dia mihena ny haavon'ny glutathione ao amin'ny vatantsika satria ny vatantsika dia miteraka ambany sy kely kokoa ny glutathione. Miteraka kely kokoa izany mofomamy ao amin'ny vatantsika. Ny vatany dia mitahiry tavy betsaka kokoa. Mampitombo ny fanelingelenana ny insuline koa izany.
Ny sakafo izay mampitombo ny haavon'ny cysteine ​​sy glycine dia hampitombo ny famokarana glutathione ao amin'ny vatantsika. Ity fahatongavan'ny glutathione ity dia manampy amin'ny fanoherana insuline lehibe kokoa sy ny fandoroana tavy avo kokoa.
6. Ny marary varotra peripheral dia mahita fihetsehana mihatsara kokoa
Ny arteria periferi dia mampijaly ny olona izay voan'ny aretin'ny planiôma. Ny aretina amin'ny ankamaroan'ny olona dia misy fiatraikany. Mitranga izany rehefa tsy afaka manome ny habetsaky ny ra amin'ny hozatra ny takelaka raikitra rehefa mila azy ny hozatra. Ny olona mijaly amin'ny aretin-taolana periferal dia hahita fanaintainana sy harerahana rehefa mandeha.
Glutathione, notanterahina tam-po indroa isan'andro, dia nanatsara ny toe-javatra nisy azy ireo. Afaka nandeha lavitra lavitra ny olona tsirairay ary tsy nitaraina ny fanaintainany.
7. Glutathione ho an'ny hoditra
Ny tombotsoan'ny Glutathione dia mihitatra ihany koa amin'ny fitazomana ny hoditra salama ary hikarakarana azy. Ny mony, ny maina ny hoditra, ny eczema, ny vony, ary ny maso mitambatra dia azo tsaboina amin'ny fatra glutathione mety.
Ny fampiasana glutathione ho an'ny hoditra dia manakana ny tyrosinase, enzim izay mamokatra melanin. Ny fampiasana glutathione mandritra ny fotoana maharitra dia mitarika hoditra maivana kokoa noho ny famokarana menaka mihena. Naseho koa ny hampihena ny psoriasis, hanatsara ny elastika amin'ny hoditra ary hampihenana ny soritr'aretina.
8. Manala ny soritr'aretin'ny aretin'i Parkinson
Tremors dia iray amin'ireo soritr'aretin'ny mijaly Parkinson ny aretina matetika mijaly. Izany dia satria ny aretina dia mamely ny rafi-pitabatabana afovoany. Ny fitantanana intravenous glutathione dia naneho fanatsarana ny olona voan'ny aretina. Ny fitsaboana dia nampihena ny fangovitana sy ny hamafin'ny marary voamarina. Inoana fa ny glutathione dia mety hanamora ny fiainana ireo mijaly amin'ny aretin'i Parkinson amin'ny alàlan'ny fampihenana ireo soritr'aretina asehon'ireo marary.
9. Manampy ny zaza autistika amin'ny alàlan'ny fihenan'ny fahasimban'ny oxidative
Ny ankizy manana autis dia aseho fa manana fahavoazana ambony noho ny fahasimban'ny oksidratsy amin'ny atidohany. Mandritra izany fotoana izany, ny haavon'ny glutathione dia ambany be. Izany dia nampitombo ny loza mety hateraky ny ankizy amin'ny fahavoazan'ny sela simika toy ny mercury.
Ny zaza tsaboina amin'ny fatra glutathione am-bava sy topical dia mampiseho fanatsarana mihombo amin'ny haavon'ny fatran'ny ranoka sulfate, cysteine, ary glutathione ra. Izany dia manome fanantenana fa ny fitsaboana glutathione dia afaka manatsara ny fiasan'ny atidoha ary noho izany, ny fiainan'ny zaza manana autis.
10. Afaka manampy amin'ny ady amin'ny aretina autoimun
Ny aretina autoimmune dia misy aretina celiac, aretin-tratra ary lupus. Ireo aretina ireo dia miteraka fivontosana maharitra sy fanaintainana izay mampitombo ny adin-tsaina. Ny Glutathione dia afaka mifehy ny valin'ny tsindrona ataon'ny vatana amin'ny alàlan'ny famporisihana azy na hampihena azy. Izany dia manome dokotera hampihena ny fihenjanana amin'ny alikaola amin'ny olona mijaly noho ny aretina autoimmune.
Ny aretina autoimmune dia manimba ny sela mitokazy sela amin'ny sela sasany. Glutathione dia manampy amin'ny fiarovana ny mitochondria sela amin'ny alàlan'ny fiadiana amin'ny radikaly maimaimpoana. Glutathione dia mandrisika sela fotsy sy sela T izay miady amin'ny aretina. Ny sela T natin'ny glutathione dia naneho fahaiza-manao miady amin'ny otrikaretina bakteria sy viriosy.
Rehefa mihalehibe ny vatana dia mihena ny haavon'ny glutathione ao amin'ny vatana. Mila mihinana sakafo izay hanampy ny vatana hamerina ny haavon'ny glutathione isika. Misy sakafo marobe fa misy glutathione voajanahary na glutathione manentana.
Raha ny sakafo glutathione dia mandeha ny proteinina whey-glutamylcysteine. Izay fitambaran'ny glutathione sy cysteine ​​izay manamora ny vatantsika mampisaraka ny asidra amine roa. Izy ireo dia samy antioxidant tsara.
· Sakafo allium
Ny famatsiana glutathione tsara dia sakafo avy amin'ny zava-maniry ao anatin'ny genie Allium dia manitra solifara. Sulfur manampy ny vatantsika hamokatra glutathione voajanahary bebe kokoa. Ny tongolobe, tongolo gasy, scallions, chives, shallots, ny leeks dia sakafo ananan'ny genie allium.
· Legioma mena
Ny legioma cruciferous dia misy glucosinolates izay mampisondrotra ny haavon'ny glutathione ao amin'ny vatanao. Izany no antony mahatonga ny zavamaniry mitondra an'io legioma io dia misy fofona solifara.
Zavamaniry, voadity, broccoli, kale, bok choy, brussels mipoitra, arugula, radish, watercress, ary collard legioma dia zavamanana vita amin'ny hazo fijaliana.
· Sakafo misy hanina asidra alfa-lipoik
Omby, hena taova, epinara, masirasira avy amin'ny labiera ary voatabia dia famenon-tsakafo glutathione satria manankarena asidra alpha-lipoic. Ity asidra ity dia mivoatra indray ary mampisondrotra ny haavon'ny glutathione ao amin'ny vatanao.
· Selenium sakafo manankarena
Satria ny selenium fitrandrahana trace dia manampy ny vatana amin'ny fampitomboana ny fatran'ny glutathione sy ny antioxidant hafa ao amin'ny vatana. Ny sakafo misy selenioma dia oysters, hazan-dranomasina, atody, voanjo, asparagus, holatra ary voamaina iray manontolo.
Glutathione supplement tonga amin'ny endrika maro samihafa. Azo alaina am-bava. Fa glutathione nalaina am-bava dia tsy dia mahomby amin'ny famenoana ny haavon'ny vatana ao amin'ny sangan'asa.
Ny fomba tsara kokoa amin'ny fakana suplement glutathione dia ny fihinanana glutathione liposomal amin'ny vavony foana. Ny fatran'ny glutathione mavitrika dia hita ao afovoan'ny liposome. Ny fihinanana am-bava an'io am-bava io dia fomba tsara kokoa hampitomboana ny haavon'ny glutathione amin'ny vatana.
Glutathione dia azo afindrina amin'ny nebulizer manokana ihany koa. Saingy mila fanafody hampiasana azy ianao.
Misy Transdermals sy lotion azo ampiasaina izay azo ampiharina. Ny tahan'ny fidiran'izy ireo dia miovaova ary indraindray tsy azo itokisana indraindray.
Ny fitantanana intravenous no fomba mivantana indrindra amin'ny fampiasana glutathione supplement. Izy koa no fomba manaitaitra indrindra.
Vokatry ny lafiny glutathione
Ny fanampian'ny glutathione dia misy fiantraikany tsy fahita firy. Mety hitera-drà izy ireo. tsentsina kibo, lasantsy. lakana tsy mitongilana, ary mety hihetsika alika. Tsara kokoa ny manatona mpitsabo anao alohan'ny maka glutathione supplement.
Ny fatra glutathione takiana amin'ny olona iray dia mety miovaova arakaraka ny taonan'ny olona, ​​ny lanjany ary ny fisiôlôjia. Mety miankina amin'ny toe-pahasalamany sy ny tantaram-pahasalamany koa izany. Tsara kokoa ny manatona ny dokoteranao mba hahitana hoe inona ny fatra fanampiny tokony horaisinao.
Glutathione dia molekiola lehibe ao amin'ny vatantsika. Izy io dia antioxidant mahery ary manampy ny vatana hitandrina ny fizahana ireo radikaly malalaka. Izany dia mitazona antsika ho salama sy hahitana aretina toy ny olana amin'ny fo, homamiadana ary aretim-po.
Zava-dehibe ny fitazonana ny glutathione avo lenta indrindra amin'ny vatantsika. Misy fomba maro ahafahantsika manao izany. Azontsika atao ny mihinana sakafo manankarena amin'ny glutathione, maka glutathione am-bava, mampihatra azy io amin'ny fomba fitantanana am-bidy.
Mikatsaha torohevitra ara-pitsaboana isaky ny manapa-kevitra ny handray glutathione suplemento ianao mba hanovana ny haavony ao amin'ny vatanao.
Rouhier N, Lemaire SD, Jacquot JP (2008). "Ny andraikitry ny glutathione amin'ny zavamiaina photosynthetic: fiasa mipoitra ho an'ny glutaredoxins sy glutathionylation". Famerenana isan-taona ny biolojia zavamaniry. 59 (1): 143–66.
Franco, R. Schoneveld, OJ; Pappa, A.; Panayiotidis, MI (2007). "Ny anjara andraikitra lehibe amin'ny glutathione amin'ny pathophysiology ny aretin'olombelona". Archives of Physiology and Biochemistry. 113 (4–5): 234–258.
1.Inona ny Glutathione?
2.Soa azo avy amin'ny Glutathione
3. Sakafo Glutathione